Boorsooyinka shandadaha & Kiisaska Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Shandadaha Bacda Samaynta Qalabka iyo Alaabada
Marka ay timaado inaad iibsato boorsooyinka saxda ah ee samaynta shandadaha, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad tayo leedahay. Waxaad si sahal ah ku sameyn kartaa tan adoo adeegsanaya internetka oo marka hore iska hubinaya alaab-qeybiyeyaasha. Haddii aadan aqoon waxa aad raadineyso markii aad wax ka iibsaneysid boorso kale, markaa malaha taasi ma caawinayso […]Read More
Xulista alaab-qeybiyeha saxda ah ee boorsooyinkaaga Fasaxa Ciyaaraha
Hal dariiqo oo shirkaddu ku ballaarin karto macaamiisheeda waa iyada oo la siinayo bacaha xilliga firaaqada. Boorsooyinkan ayaa caan ku ah macaamiisha badan ee iyagu iska leh. Tirada macaamiisha iyaga doorbida ayaa iyaguna maalin kasta kordhaya. Haddii aad rabto inaad u siiso macmiilkaaga boorsooyinka xilliga firaaqada, waxaa jira waxyaabo badan […]Read More
Talooyin Ku Saabsan Iibsashada Gear Dijital ah iyo Boorsooyinka Kaamirooyinka
Qeybiyeyaasha saddexaad ee alaabada dhijitaalka ah ayaa cirka isku shareeray dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Tani waa natiijada kor u kaca caan ka ah alaabooyinka ugu dambeeyay, kuwa ugu kulul. Dhammaan kuwa soo saareyaasha ah ee ku tiirsanaa shirkadaha kamaradaha ilaha ay ka helaan kamaradaha dijital ah ayaa hadda u weecanaya alaab-qeybiyeyaasha badan ee alaabada dhijitaalka ah. Dijital ah […]Read More